Fampiharana - Bengbu Dongli Chemical Co., Ltd.
fanalefahana: Ny fanalefahana ny rano indostrialy dia dingana iray izay mampiasa resins fifanakalozana ion mba hampihenana ny fatran'ny ion-kalsioma sy manezioma. Ireo metaly tanimanga misy alikaola ireo dia mety hiteraka olana amin'ny fikajiana sy tsy fahamaizana amin'ny fampiasana rano isan'andro amin'ny fananganana mizana kalsioma sy magnesium carbonate.
Matetika, ny resina asidra mahery (SAC) dia ampiasaina ary averina miverina amin'ny sodium chloride (brine). Amin'ny tranga misy rano avo TDS na haavon'ny hamafin'ny avo, ny resina SAC indraindray dia alohan'ny resina Malemy asidra (WAC).
Fanalefahana azo ampiasaina: GC104, GC107, GC108, MC001, MA113
Demineralisation: antsoina koa hoe déionisation, dia faritana matetika ho fanesorana ny cations rehetra (oh: calcium, magnesium, sodium, potassium, iron ary metaly mavesatra hafa) sy anion (oh: alkalinity bicarbonate, chloride, sulfate, nitrate, silica ary CO2) avy amin'ny a vahaolana ho takalon'ny H + sy OH- ions. Io dia mampihena ny solo-bavan'ny vahaolana rehetra. Takiana amin'ny fizotran'ny saro-pady maro, toy ny fiasan'ny boiler avo lenta, ny fampiharana sakafo sy ny fanafody ary ny famokarana elektronika
Demineralization misy resins : GC107, GC108, GC109, GC110, GC116, MC001, MA113, GA102, GA104, GA105, GA107, GA202, GA213, MA201, MA202, MA213, MA301
DL407 dia amin'ny fanesorana nitrate amin'ny rano azo sotroina.
DL408 dia ho an'ny fanesorana arsenika amin'ny vahaolana asidra solifara ambany.
DL403 dia ho an'ny boron avy amin'ny rano azo sotroina.
Rano Ultrapure: Ny andian-tsarimihetsika Dongli MB dia vonona hampiasa resins fandriana mifangaro ho an'ny rano ultrapure dia amboarina manokana hamaly ny filan'ny indostrian'ny elektronika amin'ny famokarana wafer sy microchip. Ireo filàna ireo dia mitaky kalitaon'ny rano avo indrindra (<1 ppb Total Organic Carbon (TOC) sy> 18.2 MΩ · cm resistivity, miaraka amin'ny fotoana fandroana farafahakeliny), sady manala ny fandotoana ireo faritry ny fahadiovana avo lenta rehefa napetraka voalohany ny resin ny fifanakalozana ion.
MB100 dia ho an'ny fanapahana tariby EDM.
MB101, MB102, MB103 dia ho an'ny rano ultrapure.
MB104 dia ho an'ny fandefasana condensate amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra.
Dongli dia manome ihany koa mari-pamantarana MB resin, rehefa tsy mahomby ny resin dia hampiseho loko hafa izy, ary mampahatsiahy avy hatrany ny mpampiasa hanolo na hamerina amin'ny laoniny ara-potoana.
Sakafo sy siramamy
Dongli dia manolotra tsipika feno resina avo lenta ho an'ny siramamy, katsaka, varimbazaha ary cellulose decolorization, hydrolyzate, fisarahana ary fanadiovana miasa miaraka amin'ny fanadiovana ny asidra organika.
Fitsaboana rano maloto voajanahary misy Phenol H103
Fanesorana vy mavesatra, Arsenic (DL408), Mercury (DL405), Chromium (DL401)
Fitsaboana entona mandany (XAD-100)
Fitrandrahana volamena avy amin'ny pulp cyanide MA301G
Fitrandrahana uranium avy amin'ny ore MA201, GA107
Voadio voadio ao amin'ny indostrian'ny kaômonika ionic soda DL401, DL402
Fitsaboana rano mangatsiaka condensate sy anatiny ao amin'ny zavamaniry mafana MB104
Fanomanana ny rano ultrapure amin'ny toby nokleary.
Zavamaniry & Fisarahana
Ny resins D101, AB-8 dia fangatahana fitrandrahana saponins, polyphenols, flavonoids, alkaloids ary fanafody raokandro sinoa.